Muqdisho oo lagu Qabtay Gabadh la Afduubtay iyo Raggii Qaadhiga ku Qaatay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Muqdisho ( Kalshaale ) Ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa shalay magaalada Muqdisho ku qabtay gaari iyo kooxdii saarneyd oo qof dumar ah ka afduubtay degmada Xamar Jajab ee gobalka Banaadir.
Thats what federal means: gobolkayga la tartansii gobolka kula deriska ah. Yaan lagaa horumar fiican iyo aqoon.
I see Good future for Somalia.
Gobolo horumar ku tartamaya ayaa dhismaya anagoo u jeedna.
Yaan tareenka federalka oo dhaweeya boorka lagaaga tegin, cidna loo joogin maayo hadda federalism socda.
Barbarkay ka baxdaa waa Bakayle qalato.
Mooryaantu markuu Magaladii god dhurwaa ka dhigeen ayey hadda dadkii gadanayaan.
Waa in la toogto kuwa Gabdhaha Dhibaateeyo.
Cudurkii Bari laga sheego, gurigaada ka dey ayaan maqli jirey.
Kuwaan waxaa fican in aragti lagu toogto
Waar berigii Maxaakimta joogeen si kasta oo tabar darraayeen haddana waxan oo kale ma dhici jirin.
Daanyeerta dumarka iyo caruurta iwm afduubaya waa in aragti lagu toogto.
Sidaa ayaa lagu joojin karaa jariimadan yaabka leh.
Haddii ay Hayado shisheeeye ama maxalli ah ka dambeeyaan waa in lagu fasaxaa police happy trigger deetana xasuuqaan oo dhegta dhiigga loo daraa.